Bible Mu Nsɛm Ɔbɔfo Ba Maria Nkyɛn - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ƆBEA a ne ho yɛ fɛ yi yɛ Maria. Ɔyɛ Israelni bea, a ɔte Nasaret. Na Onyankopɔn nim sɛ ɔyɛ onipa pa. Ɛno nti na ɔsomaa ne bɔfo Gabriel ma ɔne no bɛkasae. Wunim nea Gabriel bɛka kyerɛɛ Maria? Ma yɛnhwɛ.
Gabriel ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mikyia wo, wo a wɔadom wo. Yehowa ka wo ho.’ Ná Maria nhuu saa nipa yi da. Ɛhaw no, efisɛ na onnim nea ɔkyerɛ. Nanso ɛhɔ ara na Gabriel maa Maria koma tɔɔ ne yam.
Ɔkae sɛ: ‘Maria, nsuro. Yehowa ani gye wo ho. Ɛno nti ɔrebɛyɛ ade kɛse bi ama wo. Ɛrenkyɛ wobɛwo ba. Ɛsɛ sɛ wofrɛ no Yesu.’
Gabriel toaa so kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Abofra yi bɛyɛ kɛse, na wɔbɛfrɛ no Ɔsorosoro Nyankopɔn no Ba. Yehowa bɛyɛ no ɔhene, te sɛ Dawid. Nanso Yesu bedi hene daa daa, na n’ahenni to rentwa da!’
Maria bisae sɛ: ‘Ɛbɛyɛ dɛn na eyi nyinaa aba? Menwaree. Me ne ɔbarima ntrae da, enti ɛbɛyɛ dɛn na mawo ba?’
Gabriel buae sɛ: ‘Onyankopɔn tumi bɛba wo so. Enti wɔbɛfrɛ abofra no Onyankopɔn Ba.’ Afei ɔka kyerɛɛ Maria sɛ: ‘Kae wo busuani Elisabet. Nkurɔfo kae sɛ wabɔ aberewa dodo sɛ ɔbɛwo. Nanso ɛrenkyɛ ɔbɛwo. Enti woahu, biribiara nni hɔ a Onyankopɔn ntumi nyɛ.’
Amonom hɔ ara Maria kae sɛ: ‘Meyɛ Yehowa afenaa! Nea woaka no mmra mu saa wɔ me so.’ Afei ɔbɔfo no fii hɔ kɔe.
Maria yɛɛ ntɛm kɔɔ Elisabet nkyɛn. Bere a Elisabet tee Maria nne no, abofra a ɔwɔ Elisabet yam no de anigye huruwii. Ná Onyankopɔn honhom ahyɛ Elisabet ma, enti ɔka kyerɛɛ Maria sɛ: ‘Wɔahyira wo kɛse wɔ mmea mu.’ Maria ne Elisabet trae bɛyɛ asram abiɛsa, na afei ɔsan kɔɔ ne kurom Nasaret.
Ná ɔbarima bi a wɔfrɛ no Yosef rebɛware Maria. Nanso bere a Yosef hui sɛ Maria anyinsɛn no, wansusuw sɛ ɛsɛ sɛ ɔware no. Ɛnna Onyankopɔn bɔfo ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Nsuro sɛ wobɛware Maria. Efisɛ Onyankopɔn na ama no ɔba.’ Enti Maria ne Yosef waree, na wɔtwɛnee ma wɔwoo Yesu.
Luka 1:26-56; Mateo 1:18-25.
Hena ne ɔbea a ɔwɔ mfonini no mu no?
Dɛn na Gabriel ka kyerɛɛ Maria?
Nsɛm bɛn na Gabriel ka de kyerɛɛ Maria sɛ ɔbɛwo ba bere a ɔne ɔbarima ntrae da no?
Dɛn na esii bere a Maria kɔsraa ne busuani Elisabet no?
Adwene bɛn na Yosef nyae bere a ohui sɛ Maria anyinsɛn no, nanso dɛn nti na ɔsesaa n’adwene?
Kenkan Luka 1:26-56.
Dɛn na Luka 1:35 ka de kyerɛ sɛ bere a woyii Onyankopɔn Ba no nkwa fii soro bɛhyɛɛ Maria awotwaa mu no, Onyankopɔn bɔɔ ho ban fii sintɔ a Adam de awo yɛn mu? (Hag. 2:11-13; Yoh. 6:69; Heb. 7:26; 10:5)
Ɔkwan bɛn so na wɔhyɛɛ Yesu anuonyam mpo ansa na wɔrewo no? (Luka 1:41-43)
Nhwɛso pa bɛn na Maria yɛ maa Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ a wɔn nsa ka ɔsom mu hokwan soronko no? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Mmeb. 11:2)
Kenkan Mateo 1:18-25.
Ɛwom sɛ wɔanhyɛ da amfa edin Imanuel amma Yesu de, nanso ɔkwan bɛn so na dwuma a odii sɛ onipa no ma nea ɛkyerɛ no nyaa mmamu? (Mat. 1:22, 23; Yoh. 14:8-10; Heb. 1:1-3)
Onyankopɔn De Amanneɛbɔ Mmienu Bi Too Dwa
Ɔbɔfo Gabriel de amanneɛbɔ bi a obiara ntee bi da too dwa.
Maria​—“Hwɛ! Meyɛ Yehowa Afenaa!”
Dɛn na mmuae a Maria de maa ɔbɔfo Gabriel no ma yehu fa ne gyidi ho? Su pa afoforo bɛn na ɔdaa no adi?